Azoko atao ve ny manangana rindranasa avo lenta izay tsy atahorana hanisy ratsy ny toerana misy ahy?
Ny vohikala azo itokisana sy blôgy amin'ny pejy PageRank sy ny sehatra ahazoana sehatra dia ny toerana tokony hanamboarana rindry avo lenta amin'ny. Raha ny tena izy dia mandinika ireo rindran-damina ireo ny motera fikarohana mba "hahatakatra" ny tombontsoa azo avy amin'ny tranonkalanao, ary ny habetsaky ny vidiny omeny amin'ny mpampiasa. Izany no antony ilàna ny mombamomba ny tranonkala na ny blôgika tena ilaina, raha tsy tianao ny hampiseho azy any amin'ny toerana lavitra lavitra ny valin'ny fikarohana ao amin'ny SERPs Google.
Inona no mahatonga ny Organic Link Profile
Etsy andaniny, ny profil organiques tsara dia manoro hevitra fa ianao dia hanangana rindran-kiheba avo lenta fotsiny raha ny ara-boajanahary sy ara-boajanahary. Ohatra, ny sangisangy, spammy, ambany, manipulative, komity na fifanakalozan-dresaka miaraka amin'ny rohy no tena ankahalan'ny Google.Raha ny tena izy, ny hetsika tahaka izany dia tsy mahomby raha manaraka ny toro-làlana Main Webmasters, izay ankatoavin'ny ankapobeny ho an'ny fampiroboroboana amin'ny Internet ary ny teboka rehetra amin'ny Search Engine Optimization amin'ny isa. Noho izany, inona no mahatonga ny tetikady fanorenana rohy "ara-dalàna" izay tsy ho eken'ny ho toy ny fanitsakitsahana? Ny zavatra rehetra ilainao dia ny hananganana lozisialy avo lenta nefa tsy mila ampiharina amin'ireo efa voalaza tetsy sy tetika ampiasaina, izay tsy voamarina amin'ny motera fikarohana lehibe. Ataovy tsotra fotsiny ny zava-mitranga.
Aoka Ianao ho Tsara
Alefa any amin'ny toerana. Inona no fomba tsy azo lavina indrindra amin'ny fananganana rohy amin'ny kalitao? Mino aho fa ny zavatra rehetra ilainao hahatsiaro ho voaro dia ny manalavitra ny "farihy maizina". Aza mandeha any amin'ny SEO na Black-Hat SEO teknôlôjia, izay mikasa hisambotra na hanodina an'io algorithm fampiasa amin'ny alàlan'ny Google io mba hamaritana ny toerana misy ny tranonkala rehetra ao amin'ny SERP. Amin'izany fomba izany, tsy hisy ny toerana hanamarinana ny fampidirana ny tranokalanao na ny blôgy amin'ny sazy mihatra amin'ny Google.
Amporisiho ny fifandraisana amin'ny Quality Content
Ataovy ny mombamomba anao ho ohatra mahasoa mba hanamboarana rindran-damba tsara amin'ny fomba tsara indrindra. Azo antoka fa izany no fomba faran'izay azo antoka indrindra amin'ny fananganana rohy organika tsy misy loza mety hanimba ny fandehananao. Tadidio fa afaka maka mihoatra noho ny votoatin'ny pejy tsy tapaka ianao - ny hany ilainao dia ny mba hahazoana toky fa tsy manan-tsahala, manan-danja ary manome valiny tena izy ho an'ny mpihaino anao. Amin'izany fomba izany, dia ho afaka hanohy ny resadresaka, ny fitarihana, ny famandrihana, ny fizarana, ary ny filazana. Amin'izay fotoana izay ihany, ianao dia hiorina amin'ny maha-mpitarika indostrialy sy tomponandraikitra anao, ao anatin'izany ny fahazoana lanja bebe kokoa amin'ny tranokalanao na bilaogy - amin'ny fomba fijerin'ny mpitsidika mahagaga anao, ary koa ny karoka fitadiavana.
Farany, ireto misy sombiny bala sasantsasany ho anao hanomboka hizotra amin'ny làlana marina. Amin'izany fomba izany, afaka manangana rindrankajy ambony ho an'ny tanjona SEO ianao ary mahatsiaro ho voaro hatrany am-piandohana:
Mitandrema fa ny votoatinao dia tsy manome afa-tsy ny olona ambony, fa manome azy pifidianana. Fotoana izao hahatsiarovana ny fototry ny dokambarotra dizitaly taloha, sa tsy izany?).
Aoka ianao ho hendry hanangana fanatanjahana mahery vaika amin'ny tranokalanao. Mandray anjara amin'ireo vondrom-piarahamonina liana ary mamorona profiles haitao haingana mba hizara ny asa sorany tsara indrindra amin'ny Social Media.
Diniho ny fanavaozana ampahany amin'ny votoatiny tsotra. Tadidio fa mila manangana ravina voajanahary voajanahary ianao - ny votoatiny tokony hizara, hanonona, ary hifandray. Ataovy izany amin'ny fomba tsy dia mahazatra loatra - mamerina manamboatra sombin-tsarimihetsika sy sarobidy vitsivitsy amin'ny zavatra tena mahafinaritra sy manintona, toy ny infographics isan-karazany, ny takelaka finday, ary ireo fitaovana hafa amin'ny fampisehoana ara-pahitalavitra. Izany dia tena miasa amin'ny fanorenana rohy, ankoatra ny fomba azo antoka indrindra Source .